सिल्टल विशेषज्ञले एक उपयोगी वेबसाइट स्क्रैपिंग उपकरण परिभाषित गर्दछ
वेबसाइट एक्सक्टेक्टर को अफलाइन उपयोग को लागी सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न को लागि डिजाइन गरियो. यो सबैभन्दा फायदेमंद र शक्तिशाली उपकरण हो. तपाईले भर्खरै URL को डेटा डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ, र वेबसाइट एक्स्ट्रेक्टरले तपाईको प्रकार्य तुरुन्तै प्रदर्शन गर्नेछ, तपाईलाई सही र वांछित परिणाम दिनेछ।.
शोधकर्ताहरु, मार्केटर्स, र पत्रकारहरु को लागि उपयुक्त:
वेबसाइट एक्स्ट्रक्टर केवल विद्यार्थीहरु, व्यवसायीहरु, अधिकारियों को विपणन, तर पत्रकारहरु, शोधकर्ताहरु र इक्विटी विश्लेषकहरु को लागि पनि आदर्श को लागि राम्रो छैन. त्यहाँ अफलाइन हुँदा वेबसाइटमा पहुँच आवश्यक पर्दछ, वा तपाईले तपाइँको महत्त्वपूर्ण फाइलहरू जगेडा गर्न चाहानुहुन्छ, तर तपाईंको होस्टिंग कम्पनीले यो विकल्प प्रदान गर्दैन।. वेबसाइट एक्सटेक्चरको साथ, तपाईको फाइलहरू ब्याकअप गर्न सजिलो छ किनकि सम्पूर्ण सामग्री तपाईको हार्ड डिस्कमा तुरुन्तै डाउनलोड गरिन्छ - kit green vapes. शोधकर्ताहरू अनुसन्धान कागजातहरू, ई-पुस्तकहरू र इन्टरनेटबाट अन्य डेटा डाउनलोड गर्न सक्छन्. त्यसैगरी, डिजिटल मार्केटर्स र पत्रकारहरूले डेटालाई आफ्नो व्यवसाय बढाउनको लागि डाउनलोड गर्न सक्छन्.
पहुँच वेब सामग्री सजिलै संग:
वेबसाइट एक्स्ट्राटर संग, तपाईं सजिलै संग वेब सामग्री को उपयोग गर्न सक्छन् र केहि कार्यहरु लाई पूरा गर्न सक्छन्. केहि वेबसाइटहरू र ब्लगहरू सधैंभरि रहन सक्दैनन्; यदि तपाईं तिनीहरूको डेटा पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँसँग फाईलहरू ब्याकअप गर्न वा वेबसाइट एक्सक्सक्रिकर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. फाइलहरू जगेडा धेरै समय र ऊर्जा लिन सक्छ. यसको विपरीत, वेबसाइट एक्स्ट्रेक्टरले तपाईंको काम सजिलो बनाउनेछ र तपाईंलाई सम्पूर्ण साइट अफलाइनमा पहुँच गर्न दिनेछ. यसको अर्थ तपाईंले कुनै पनि समयमा, कहीं पनि एक विशेष साइटको सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ.
ट्याबलेटहरू, स्मार्टफोन्स र कम्प्यूटर उपकरणहरूसँग उपयुक्त:
वेब साइट एक्टरको प्रमुख विशेषताहरू यो हो कि यो लगभग सबै यन्त्रहरूसँग उपयुक्त छ, जस्तै स्मार्टफोनहरू, कम्प्युटर यन्त्रहरू, र ट्याब्लेट. वास्तवमा यो यन्त्रले तपाइँलाई तपाइँको मोबाइल फोनमा कुनै पनि साइट बचत गर्न अनुमति दिन्छ ताकि यसले अफलाइन हेर्न सक्छ. कुन कुराले वेबसाईट एक्सक्टेक्टरलाई अन्य समान अनुप्रयोगबाट फरक बनाउँछ भनेर यसले तपाईको उपकरणमा सम्पूर्ण वेबपेज बचत गर्दछ. यसको मतलब तपाईं कुनै पनि समस्या बिना पाठ, छविहरू, अडियो र भिडियो फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ.
सामग्रीलाई एक हटाउन सकिने यन्त्रमा सार्नुहोस्:
वेबसाइट एक्स्ट्रेटरको साथ, तपाईं केवल पूरा साइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न तर यसको सामग्रीलाई हटाउन सकिने यन्त्रमा पनि हटाउन सक्दछ जस्तै फ्लपी डिस्क र सीडी-रोम. यो उपकरणले 100 फाइलहरूमा तपाइँको कम्प्युटर प्रणालीमा मिनेटको कुरामा डाउनलोड गर्न सक्दछ. यसले पृष्ठहरूलाई तपाईँको उपकरणमा बचत गर्न ट्रिगर गर्दछ, र सम्पूर्ण प्रक्रियाले केहि सेकेण्ड लिन सक्छ.
एचटीएमएल लिङ्कहरू परिवर्तन गर्नुहोस्:
वेबसाइट एक्सक्क्टररसँग, तपाईंले HTML लिङ्कहरू वांछित नामहरूमा बदल्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको व्यवसाय बढ्न सक्छ।. तपाईं HTML लिङ्क सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ, वा यो व्यापक सेवाको साथ अन्य परिवर्तनहरू गर्न सक्नुहुन्छ. एकपटक एक पटक डाउनलोड भएमा, यो त त स्थानीय स्तरमा तपाईको हार्ड डिस्क वा मोबाइल मेमोरीमा भण्डारण गरिनेछ. तपाईं वेबसाइटका एक्सटेक्चरको डेटाबेसमा तपाइँका आवश्यकताहरूमा आधारित अंशहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ. हामी बचत गरिएका पृष्ठहरू मार्फत बिजुली गतिमा व्ज्ज गर्न सक्छौं.
वेबसाइट एक्स्ट्रार्टर प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेसको साथ आउँछ र लगभग सबै अपरेटिङ सिस्टम र वेब ब्राउजरसँग मिल्दो छ।. यो उपकरण दुवै नि: शुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा आउँछ र शीर्ष-निशान र गुणवत्ता परिणाम सुनिश्चित गर्दछ.